Debian 9.5 inosunungurwa zviri pamutemo | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pemaawa ekupedzisira vhezheni itsva yeDebian yaburitswa, vhezheni yatinofanira kutaura kuti hapana chakadai chinhu. Debian 9.5 ndeyekuvandudza kune Debian 9 Stretch, iyo yazvino kugadzikana kusunungurwa kweDebian. Debian 9.5 yakafanana neUbuntu LTS kuburitswa, kugadzirisa uye kugadzirisa shanduro dzemapakeji makuru mukuparadzira.
Kuti, Debian 9.5 haimiriri chero chinhu chitsva mukugovera asi inoita kuti kugovera kuve kwakachengeteka uye kugadzikana kana zvichibvira.Debian 9.5 ikozvino inogona kuwanikwa kuburikidza neiyo yekugadza yekumisikidza ISO mifananidzo uye zvakare kubva kune ekugovana mareti, iyo yekupedzisira inogona kuwanikwa nekuita iwo wekuraira:
Kugadzirisazve iyi vhezheni kwakakosha uye kunodikanwa, zvirinani kana tichida kuve neyakachengeteka uye yakagadzikana sisitimu yekushandisa. Debian 9.5 inosanganisira zana ekuchengetedza zvigamba uye makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekugadzirisaManhamba akakosha ekufunga nezve kuchengetedzeka kwesystem yedu, kana tikashandisa Debian seGnu / Linux kugovera komputa yedu.
Iwo mapuratifomu akatsigirwa naDebian 9.5 anoramba akafanana uye hapana makuru makuru akaiswa, i.e. Debian 9.5 haizotakura nezvitsva zveGnome kana Plasma, hazvingasanganisiwo madhipatimendi matsva kana shanduro nyowani dzeGTK kana Qt maraibhurari, anopfuura Debian 9 Stretch yakaunzwa nekusunungurwa kwayo.
Izvo zvakakosha kuti uve unodzokorora sezvo kuchine kumwe kunyengera pamwe ne "nyowani" shanduro dzekushambadzira kweGnu / Linux. Nezve mabatirwo ezvekuchengetedza pamwe nekugadzirisa zvebug, isu tinofanirwa kutaura kuti akawanda zvinoshanda kuzvirongwa zvine chekuita nenyika yevhavha uye webhu kuvandudza. Saka zvigamba izvi zvinokanganisa zvirongwa zvakaita seApache2, Postgresql, Gitlab, Python, Samba kana openSSL kutaura zvimwe zvezvikwiriso izvi uye zvigadziriso zvebug. Kune rimwe divi chimwe chinhu chakajairika kubvira Debian ichiri kunyatso kubudirira muServer nyika.
Debian ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anoshandiswa zvakanyanya kugoverwa kweGnu / Linux kune ese Server nyika uye Desktop pasi. Uye zvese izvi nekutenda kune zvazvinopa: kudzikama uye rusununguko mashoma masisitimu anoshanda ane.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 9.5 inosunungurwa zviri pamutemo
Linux 4.18 rc5: iyo nyowani kernel RC yakaziviswa kubva kuLKML